ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ နေ့စဉ်သတင်းစာ ထုတ်ဝေမည် | ဧရာဝတီ
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ နေ့စဉ်သတင်းစာ ထုတ်ဝေမည်
သာလွန်ဇောင်းထက်| January 17, 2013 | Hits:1,533
5 | | နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဌာနချုပ်တွင် ဧရာဝတီသတင်းဌာန၏ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားနေသော ပါတီ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦး (ဓာတ်ပုံ – သာလွန်ဇောင်းထက် / ဧရာဝတီ)
အာဏာရ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ) က နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ ထုတ်ဝေရန် ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ပါတီ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦးက ပြောသည်။
နေပြည်တော်ရှိ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဌာနချုပ်ရုံးတွင် ဇန်န၀ါရီလ ၁၇ ရက်နေ့က ဧရာဝတီသတင်းဌာနနှင့် သီးသန့်တွေ့ဆုံစဉ် ဦးဌေးဦးက ယင်းသို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ်အက်ဥပဒေဖြင့် ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာများ ထုတ်ဝေခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ခွင့်ပြုသွားမည်ဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အနေနှင့်လည်း သတင်းစာ ထုတ်ဝေနိုင်ရေး ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း ဦးဌေးဦးက ပြောသည်။
“ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာ ဌာနရှိတယ်။ ပညာရေးဌာနက ဦးစီးပြီးလုပ်နေကြတယ်။ သတင်းစာထုတ်ဖို့ နဂိုကတည်းက ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်။ ပါတီရဲ့အာဘော်ကို လူထုကြားမှာ ပျံ့နှံ့အောင် သတင်းစာ ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ ရည်းမှန်းချက်ရှိတယ်။ ပါတီအာဘော်ချည်းပဲ သတင်းစာထုတ်ရင်ရော အောင်မြင်ပါ့မလား၊ လူထုလက်ခံပါ့မလား၊ ဒါလည်းရှိပါတယ်။ သတင်းစာဆိုတာ သိပ်ကျယ်ပြန့်တယ်။ ဂျာနယ်တို့ မဂ္ဂဇင်းတို့နဲ့တောင် မတူဘူး” ဟု ဦးဌေးဦးက ဆိုသည်။
အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတခုဖြစ်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကလည်း အပတ်စဉ်ထုတ်ဝေနေသော ဒီလှိုင်းဂျာနယ်ကို နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာအဖြစ် အသွင်ပြောင်း ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားရာ ပုဂ္ဂလိက နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများနှင့်အတူ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ထုတ်ဝေသော သတင်းစာများပါ အပြိုင်အဆိုင် ထွက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ ထုတ်ဝေရာတွင် ပါတီဝင်များသာမက ပြင်ပမှ ကျွမ်းကျင်သူများကိုလည်း ခေါ်ယူလုပ်ကိုင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာအဖြစ် လူထုကြားတွင် အောင်မြင်ရေးသည် စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိနေကြောင်း ဦးဌေးဦးက ဆိုသည်။
“ကျွမ်းကျင်တဲ့သူနဲ့ လုပ်ရမှာပဲ။ ပါတီဝင် ဟုတ်ချင်လည်း ဟုတ်မယ်၊ မဟုတ်ချင်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတော့ ပါမှာပေါ့။ နေ့စဉ်သွားရတဲ့အထဲမှာ ပြည်သူတွေကို ဘယ်လို အချက်အလက်တွေကို ပေးမှာလဲ။ ဒါကလည်း နောက်ကျသွားရင် အဖိုးမတန်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေကို ဦးဦးဖျားဖျား သူသိချင်တဲ့ ဥစ္စာတွေ ဘယ်လိုပေးမလဲ၊ ပြည်သူတွေ သိချင်တာတွေ ဘယ်လိုဖော်ပြမလဲဆိုတာ သိပ်ပြီးတော့ ခက်ခဲတယ်။ သတင်းစာထုတ်တာ အပြောသာ လွယ်တာ၊ အလုပ်က ခက်ခဲတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ကြိုးစားနေတယ်” ဟု ဦးဌေးဦးက ပြောသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအနေနှင့် စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်များ အပါအ၀င် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ထပ်မံတိုးချဲ့ရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိ ဧရာဝတီသတင်းဌာနက မေးမြန်းရာ ဦးဌေးဦးက အဓိကအားဖြင့် ပါတီဝင်များ၏ အသင်းဝင်ကြေး၊ လှူဒါန်းငွေနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတချို့မှ ရရှိသော ၀င်ငွေများဖြင့် ပါတီလုပ်ငန်းနှင့် ပြည်သူ့ရေးရာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အကျိုးအမြတ်ငွေရှာသော စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်နေခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ ယခင်က ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် စိတ်ကူးခဲ့သော်လည်း အကောင်အထည် မဖော်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဦးဌေးဦးက ဖြေကြားသည်။
“ပါတီစီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ဆီဆိုင်တွေကိစ္စ မှန်ပါတယ်။ ဆီဆိုင်တွေကို ကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီး မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး လုပ်ပါတယ်။ ထိုက်သင့်တဲ့ အကျိုးအမြတ်ရပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ တကယ်တမ်း ပြောလို့ရှိရင် ကျနော်တို့လုပ်နေတဲ့ ပြည်သူ့အကျိုး ပြုလုပ်ငန်းဆိုတာက ပါတီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့တင် မလုံလောက်ဘူး။ ကျနော်တို့က ကုမ္ပဏီထောင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးရအောင် ရှာနေတာမဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူတွေ ဘာလိုလဲ၊ လိုတဲ့ဟာကို ဘယ်လိုဆက်စပ်ပြီး အောင်မြင်အောင် လုပ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားနေကြတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် စီးပွားရေးမှာ ကျနော်တို့ ၀င်ငွေရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ပါတီဝင်ကြေးဆိုပြီး စ၀င်ဝင်ချင်း တထောင် (ပါတီဝင်တဦးလျှင် ၀င်ကြေး ၁၀၀၀ ကျပ်) ရတယ်။ (ပါတီဝင်) တသန်းရှိရင် သန်းတထောင်ရှိတာပဲ။ အဲဒါက ကျနော်တို့ဘဏ်တွေမှာ အပ်ထားတာပေါ့။ ဘဏ်အပ်ထားတော့ ဘဏ်ကပေးတဲ့အတိုး ရတာပေါ့။ ဘဏ်လုပ်ငန်းကို လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးပါတယ်။ သိပ်ခက်ခဲတယ်။ အခုချိန်ထိတော့ မဖြစ်သေးပါဘူး” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
လာမည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိနေပြီး အထူးသဖြင့် ပြည်သူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်စပ်သည့် လုပ်ငန်းများကို အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွင် လက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားပြီး ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဦးဌေးဦး၊ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ယခင် မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဟောင်း ဦးမောင်မောင်သိမ်းက တာဝန်ယူထားသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အဓိက လိုအပ်ချက်မှာ လူထုယုံကြည်မှုဟု ဆို
အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး တပ်မတော်အပေါ် သြဇာညောင်းဆဲ
ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပေါင်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ ပြင်မည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို အရေးယူရန် တောင်ဥက္ကလာ ပြည်သူများ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည်
ပြည်သူပိုင် ပန်းခြံ ပြန်ရရေး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို ဆန္ဒပြမည်
2 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Tide January 17, 2013 - 12:32 pm	What are they going to write? Propaganda after propaganda? We have seen it already. Are they going to tell that Than Shwe’s way to democracy is still the best? If they all quit, it will be the best contribution they can do best for the nation.
Reply	Anyar Thar January 18, 2013 - 1:59 pm	Htay Oo will contribute the articles, and his wife and children will read them.
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အမတ်ဟောင်း ဦးရွှေမောင်ကို ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ်မှ ပယ်ချ
အစိုးရ၏ မြစိမ်းရောင်ချေးငွေ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီပေးဟု မဲဆွယ်စည်းရုံး၍ အတိုင်ခံရ
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ USDP အောင်နိုင်ရေး ဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်မည်
နတ်တလင်း မြို့နယ်တွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင် ၄၁ ဦး နုတ်ထွက်
NLD နှင့် USDP ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နေရာမလပ် ယှဉ်ပြိုင်မည်
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်လံစည်းရုံးပြီ
ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီ လူထုတွေ့ဆုံပွဲ အစိုးရ၀န်ထမ်းများ အသုံးပြုမှု ပါတီများ ဝေဖန်
၂၀၁၅ အနိုင်ရရှိရေး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ခြေလှမ်းပြင်ပြီ